Nyi Nyi Naing's Apps
Nyi Nyi Naing's Likes
Nyi Nyi Naing's ၏မိတ်ဆွေများ
Nyi Nyi Naing's Groups
Started this discussion. Last reply by U Aye Tun Sep 22, 2015. 16 Replies2Likes
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ညီအကိုမောင်နှစ်မများ အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ သာသနာပြုခြင်းနဲ.ပါက်သက်ပြီး မိမိတို.ရဲ.အတွေးအမြင်များကိုဒီနေရာလေးမှာ မျှဝေဆွေးနွေးရအောင်လားခင်ဗျာ။သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲ၊…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by နီစံ (အနီ) Jul 2, 2011. 8 Replies 1 Like
ကျွန်တော်တို.ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာနေ.စဉ်ဘုရားရှိခိုးပြီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကုသိုလ်ကောင်းမှူတစ်ခုခု လုပ်ပြီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အမျှပေးဝေကြပါတယ်၊ပြီးရင်သာဓုခေါ်ကြပါတယ်။အဲဒီလို အမျှဝေနေတဲ.အချိန်မှာ စိတ်ကိုဘယ်လို…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by ကျော်ကို Dec 14, 2011. 27 Replies2Likes
Started this discussion. Last reply by ကျော်ကို Dec 17, 2011. 19 Replies 1 Like
ဘုရားစေတီတော်ကြီးတော်တော်များများမှာ ဘုရားပွဲ ဆိုပြီးလူတွေ လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတာကို သီလ၊သမာဓိ ပညာ ကြီးမားတဲ.ဆရာတော်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် ကန်.ကွက်ခဲ.ပါလျက်နဲ. ယခုထိတိုင်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
phyuthi သည်Nyi Nyi Naingကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
U Aye Tun replied to Nyi Nyi Naing's discussion 'ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ သာသနာပြုခြင်း...အကြောင်း ဆွေးနွေးကြမယ်'
"၁။ လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိ အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသည် သာသနာပြုခြင်းတစိတ်တဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ ဟိရိသြတ္တပ အရှက်အကြောက်တရား ရှိမှုအပေါ်တွင် သာသနာ၏ တိုးတက်မှုကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ၃။ သာသနာပြုနည်း (က) ကိုယ်တိုင်လိုက်နာခြင်း၊ ပံ့ပိုးခြင်း (ခ)…"
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်Nyi Nyi Naing's ၏ 'ဥပါသကာ ၊ ဥပါသိကာ ဆိုတာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်Nyi Nyi Naing's ၏ 'အသိနဲ. အကျင်.' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်Nyi Nyi Naing's ၏ 'သြ၀ါဒ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်Nyi Nyi Naing's ၏ 'သေမှာ မကြောက်ကြသူများ .....' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
"ငယ်ရွယ်စဉ်မှစ၍ မိဘနှစ်ပါး၏ သွန်သင်မှု မူလတန်းမှစ၍ ဆရာများ၏ သင်ကြားမှု နိုင်ငံတော်မှ မှန်ကန်သော တရားအဆီအနှစ်များကို သင်ရိုးအဖြစ် ပြဌာန်းခြင်းတို့ဖြင့်စတင်စေပြီး သံဃာတော်များမှ တင်းတင်းရင်းရင်း ဘက်မလိုက်ဘဲ ဘုရားစကားတော်အတိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း"
Nyi Nyi Naing postedastatus
"Long time no see...All Dhamma friends, be happy and secure!"
Nyi Nyi Naing သည် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s၏ 'သာသနာပြုစိတ်ဓာတ်(သို့မဟုတ်)သာသနာပြုနည်းလမ်းကောင်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Nyi Nyi Naing သည်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s ၏ 'သာသနာပြုစိတ်ဓာတ်(သို့မဟုတ်)သာသနာပြုနည်းလမ်းကောင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Nyi Nyi Naing သည် မူကြိုဆရာ's၏ 'ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တတ်ကြပါစေ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"We'll done well done well done"
Nyi Nyi Naing သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တတ်ကြပါစေ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
"May you all be happy and secure."
Nyi Nyi Naing သည် AK-47's၏ 'လေးဆယ်ကျော်အချစ် ဘယ်လိုချစ်မလဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
KO KO သည် Nyi Nyi Naing's၏ 'မြတ်ဗုဒ္ဓနှင်.ဝေဖန်ရေး'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
KO KO သည်Nyi Nyi Naing's ၏ 'မြတ်ဗုဒ္ဓနှင်.ဝေဖန်ရေး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 21, 2013 တွင်11:07am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
၀ိပဿနာ၏ပန်းတိုင်သည် သစ္စာ(၄)ပါးဖြစ်သည်။သစ္စာ(၄)ပါးတွင်လည်း အဓိကသည် နိရောဓသစ္စာ(နိဗ္ဗာန်)ဖြစ်၏။နိရောဓသစ္စာကို ဓမ္မစကြာတွင်
တဏှာချုပ်ရာဟုဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မှုသည်။တဏှာသည် ကိလေသ၀ဋ်တွင်ရှိသည်။တဏှာ၊ဥပါဒါန်ဖြစ်သော ကိလေသ၀ဋ်သည် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်
တွင်ပါဝင်၏။ပဋိစ္စသမုပါဒ်ကိုနားလည်ရန် အကြောင်းအကျိုးကို အနတ္တဥာဏ်ဖြင့်သိမြင်ရမည်။အနတ္တဥာဏ်ရရန် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဥာဏ်ကို အားထုတ်ရပေ
သည်။ဤသို.ဆိုလျှင် နာမရူပပရိစ္ဆေဒဥာဏ်သည် နာမ်ရုပ် ပိုင်းခြားသိခြင်းဖြစ်၍ ၄င်းနာမ်ရုပ်ပေါ်တွင် အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ လက္ခဏာဝင်ကာ…
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 24, 2012 တွင်12:11pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
လဲလို.သိနိုင်ပါတယ်။နားလည်အောင်ပြောရရင် လမ်းမှာစိုက်ထားတဲ. Road Sign တွေလိုပေါ.။ဒီအမှတ်အသားကိုကြည်.ရင်…
သညာ နှင်. ပညာ
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 20, 2012 တွင်6:02pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 20, 2012 တွင်5:56pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments2Likes
8:39pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 9, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:11am အချိန်သြဂုတ် 16, 2012, တွင် အရှင်အာစိဏ္ဏ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:35am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 3, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အကိုညီေ၇ မင်္ဂလာပါနော် ညီမ လာလည်ပါတယ်
http://buddhismworld.ning.com/group/admingroup လာခဲ့ပါအုံးနော် အကို။
6:51pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 27, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:44am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 9, 2011, တွင် A BuddhismworldAdmin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ.....မွေးနေ့ဆုတောင်းနောက်ကြခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်..
10:48pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 23, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုညီညီရေ ညီမ လာလည်ပါတယ်။
လက်ဆောင်အဖြစ် အကြံတွေ သယ်လာပါတယ်:)
ကိုညီပြောတဲ့ သာသနာပြုသည် ဆိုသည်မှာ ...ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးမှု forum တခု ထည့်ကြမလား အဲလိုထည့်ချင်ရင် ဆွေးနွေးချက်ထည့်ရန် ဆိုတဲ့ နေ၇ာကနေပြီး ကိုညီကနေပြီးတော့ စတင်ပေးပါ ကိုညီ။
ဒါမှမဟုတ် ကိုညီရဲ့ အသိတွေကို ဘလော့တခုအနေနဲ့ရေးပြီး တင်ပေးမယ်ဆိုရင်လဲ မဆိုးဘူး...ကိုညီအဆင်ပြေသလို အားသန်သလိုသာ လုပ်ပါ။
11:17pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 9, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
Friends18.com Miscellaneous Scraps
Friends18.com Top Rated Scraps
7:06pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 2, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:48pm အချိန်အောက်တိုဘာ 31, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:11am အချိန်အောက်တိုဘာ 31, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။